अन्तिम सिरिज खेल्दै गेल, पूरा गर्लान् यो कीर्तिमान? - Everest Dainik - News from Nepal
अन्तिम सिरिज खेल्दै गेल, पूरा गर्लान् यो कीर्तिमान?
काठमाडौं, साउन २३ । आज भारत र वेस्ट इण्डिज एक दिवसीय सिरिजको पहिलो खेल खेल्दै छन् । विश्व क्रिकेटका चर्चित हस्ती क्रिस गेलका लागि यो सिरिज अन्तिम हो । उनले यो सिरिजपछि क्रिकेटबाट संन्यास लिँदैछन् ।
गेलले सन् २०१९ मा मात्रै २ शतक बनाएका छन् । यसैबीच उनले भारत विरुद्धको वान डे सिरिजमा शतकिय पारी खेले नयाँ कीर्तिमान बनाउने सम्भावना छ । उनले वान डे क्रिकेटमा सबैभन्दा पाको उमेरमा शतक लगाउने कीर्तिमान बनाउने सम्भावना बढेकाे हाे ।
याे पनि पढ्नुस ऋषभ पन्तले बनाए नयाँ रेकर्ड, तोडियो धोनीको कीर्तिमान
हाल गेलको उमेर ३९ वर्ष र ३०० दिनभन्दा बढि छ । उनले भारतविरूद्धको खेलमा शतक लगाएमा श्रीलंकाका सनथ जयसूर्याको कीर्तिमान तोड्ने छन् । टेस्ट खेल्ने राष्ट्रहरूको कुरा गर्दा पाको उमेरमा शतक बनाउने रेकर्ड श्रीलंकाका सनथ जयसूर्याको नाममा छ। उनले भारतविरूद्ध ३९ वर्ष २१२ दिनको उमेरमा शतक प्रहार गरेका थिए।
याे पनि पढ्नुस टी–२० विश्वकपमा सर्बाधिक अर्धशतक बनाउने ५ क्रिकेटर
वर्तमान अवस्थामा पनि गेल जयसूर्या र यूएईका खुर्रम खानपछि तेस्रो स्थानमा छन् । गेलले वान डे क्रिकेटमा हालसम्म कुल २५ शतक प्रहार गरेका छन्।
दक्षिण अफ्रिकाका एबी डिलिवियर्स र श्रीलंकाका के कुमार संगकाराले पनि यति नै शतक प्रहार गरेका छन्। गेलसँग थप शतक लगाएर यी दुबै खेलाडीभन्दा अगाडि निस्कने मौका छ। त्यस्तै दुई शतक लगाएमा उनले रोहित शर्मा र हाशिम अमलासँग बराबरी गर्नेछन्।
याे पनि पढ्नुस वार्नरले बनाए अर्को कीर्तिमान, तोडियो गेलको रेकर्ड
ट्याग्स: क्रिस गेल, भारत भर्सेस वेस्ट इन्डिज, वान डे क्रिकेट सिरिज